အဖမ်းခံ လိုက်ရတဲ့ ကိုလူမင်း အဖြစ်အ ပျက်ကြောင့် အားလုံးကို ဝမ်းနည်းမျက်ရည်စို့စေခဲ့တဲ့ မခင်စံပါယ်ဦးအတွက် ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့ အားပေးစ ကားလေး တခွန်း - Pyone Pyone Lay
လက် ရှိဖြစ် ပျက်နေတဲ့ မြန်မာ့ပြည်တွင်း အရေးနဲ့ ပက်သတ် ပြီးရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊သဘင်စတဲ့ နယ်ပယ်အသီးသီး ကအနုပညာ ရှင်တွေလည်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ် ရှားနေကြ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေဖြစ် တဲ့လင်းလင်း၊ ဒါရိုက်တာဏကြီး၊လူမင်း၊ ပြေတီဦး၊ ကိုပေါက်၊ အနဂ္ဂ ၊ မောင်မောင်အေး စတဲ့အနုပညာ ရှင်တွေ ကလည်း ပုဒ်မ ၅၀၅-က နဲ့ အမှုဖွင့် ခံထားရ တာဖြစ်ပြီး ဖမ်းဝရမ်းပါ အထုတ်ခံထားရ တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မနေ့က ဖေဖော်ဝါ ရီလ (၂၀)ရက်နေ့ မှာတော့ အကယ်ဒမီမင်းသားကြီး လူမင်း ကညဘက်လူခြေတိတ် ချိန်မှာ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရ ပြီဖြစ်ပြီး အနုပ ညာရှင် အသီးသီးက လူမင်းအ တွက် စိတ်မကောင်းဝမ်း နည်းဖြစ်နေကြ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။
ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသု ကလည်း“မိသားစုပေါင်းများ စွာကျနေရ တဲ့မျက်ရည်တွေအမရေ အားတင်း ထားပါ လက်နက်အား ကိုးနဲ့ မတရားအ နိုင်ကျင့်တဲ့ သူတွေဝဋ် လည်ကြပါစေ !!!” ဆိုပြီး လူမင်းရဲ့
ဇနီး မခင်စံပယ်ဦး အတွက် အားပေးစကားပြော လာတာ ကို တွေ့ရပါ တယ်။ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ပုဒ်မ ၅၀၅-က နဲ့အမှု ဖွင့်ခံထားရတဲ့ ခင်ပွန်း ရဲ့အမျိုးသမီးပီပီ ဖမ်းဆီး ခံလိုက် ရတဲ့ လူမင်းရဲ့အမျိုးသမီး
မခင်စံပယ်ဦး အတွက် အားပေး စကားပြော လာတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြ တဲ့ပရိသတ်ကြီး အားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေး တစ်နေ့ ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက္ပါ တယ်နော် ။
အဖမျးခံ လိုကျရတဲ့ ကိုလူမငျး အဖွဈအ ပကျြကွောငျ့ အားလုံးကို ဝမျးနညျးမကျြရညျစို့စခေဲ့တဲ့ မခငျစံပါယျဦးအတှကျ ပိုငျဖွိုးသုရဲ့ အားပေးစ ကားလေး တခှနျး
လကျ ရှိဖွဈ ပကျြနတေဲ့ မွနျမာ့ပွညျတှငျး အရေးနဲ့ ပကျသတျ ပွီးရုပျရှငျ၊ ဂီတ၊သဘငျစတဲ့ နယျပယျအသီးသီး ကအနုပညာ ရှငျတှလေညျး တကျကွှစှာ ပါဝငျလှုပျ ရှားနကွေ တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
နာမညျကွီး အနုပညာရှငျတှဖွေဈ တဲ့လငျးလငျး၊ ဒါရိုကျတာဏကွီး၊လူမငျး၊ ပွတေီဦး၊ ကိုပေါကျ၊ အနဂ်ဂ ၊ မောငျမောငျအေး စတဲ့အနုပညာ ရှငျတှေ ကလညျး ပုဒျမ ၅၀၅-က နဲ့ အမှုဖှငျ့ ခံထားရ တာဖွဈပွီး ဖမျးဝရမျးပါ အထုတျခံထားရ တာ ဖွဈပါတယျ ။
မနကေ့ ဖဖေျောဝါ ရီလ (၂၀)ရကျနေ့ မှာတော့ အကယျဒမီမငျးသားကွီး လူမငျး ကညဘကျလူခွတေိတျ ခြိနျမှာ ဖမျးဆီးခံလိုကျရ ပွီဖွဈပွီး အနုပ ညာရှငျ အသီးသီးက လူမငျးအ တှကျ စိတျမကောငျးဝမျး နညျးဖွဈနကွေ တာပဲ ဖွဈပါ တယျ ။
ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ ပိုငျဖွိုးသု ကလညျး“မိသားစုပေါငျးမြား စှာကနြရေ တဲ့မကျြရညျတှအေမရေ အားတငျး ထားပါ လကျနကျအား ကိုးနဲ့ မတရားအ နိုငျကငျြ့တဲ့ သူတှဝေဋျ လညျကွပါစေ !!!” ဆိုပွီး လူမငျးရဲ့
ဇနီး မခငျစံပယျဦး အတှကျ အားပေးစကားပွော လာတာ ကို တှရေ့ပါ တယျ။ပိုငျဖွိုးသုကတော့ ပုဒျမ ၅၀၅-က နဲ့အမှု ဖှငျ့ခံထားရတဲ့ ခငျပှနျး ရဲ့အမြိုးသမီးပီပီ ဖမျးဆီး ခံလိုကျ ရတဲ့ လူမငျးရဲ့အမြိုးသမီး
မခငျစံပယျဦး အတှကျ အားပေး စကားပွော လာတာပဲ ဖွဈပါ တယျ။ ဖတျရှုပေးကွ တဲ့ပရိသတျကွီး အားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေး တဈနေ့ ကို ပိုငျဆိုငျ နိုငျကွ ပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုက်ပါ တယျနျော ။